Mhando dzakanyanya kutambwa nemitambo yemavhidhiyo paLinux muna 2018 | Linux Vakapindwa muropa
Mhando dzakanyanya kutambwa nemitambo yemavhidhiyo paLinux muna 2018
Darkcrizt | | Noticias, chiutsi
Iyo gore 2018 rave rinonakidza kwazvo maererano nemitambo inowanikwa kugoverwa kweLinux, sezvo kupihwa kwemazita emhando dzakasiyana kwakawedzera zvakanyanya.
Iine boom mumapuratifomu seSteam uye nekuvandudza mumapurojekiti akaita seDXVK, Proton (Steam Tamba), pamwe nekuvhurwa kwemapuratifomu epamhepo, huwandu hwezvipiwa zvemhando dzakasiyana zvinowedzera zveLinux gamers.
1 Linux mitambo
2 Action mitambo uye eSports boom
3 Strategic mitambo uye RPG crossovers
3.1 Nhangemutange mitambo
4 Linux Kutamba
Nekuuya kweStam Play, mitambo yakawanda yeSteam yakaramba ichimhanya paLinux zvakajairika.Parizvino pane angangoita zviuru zvitatu mazita, tisingataure nezviuru zviuru zvaive zvichitotora mavhidhiyo.
Nhasi Linux inogona kutariswa yechipiri chikuva chemitambo pamakomputa zviri nyore, zvichidarika muhuwandu (Kutenda kune Steam Tamba kunyanya) kumitambo yeMacOS, ichisara kumashure kweWindows chete.
Action mitambo uye eSports boom
Yekuita mitambo yakawana gore rinopa mari kwazvo kune ese mapuratifomu uye Linux yakanga isiri iyo.
Muchikamu ichi, mazita akadai seCounter-Strike: Global Inogumbura inomira, yaive rimwe remazita akanakisa eLinux papuratifomu yeSteam.
Zvakawanda zvave zviri kubudirira kwezita iri mu2018 zvekuti rave rimwe remitambo inozivikanwa yemitambo yeSports.
Mupfungwa iyi, nyika dzine chiitiko chakanyanya muSports dzinogona kuwanikwa muChina, United States neBrazil.
Brazil yakafungidzirwa seimwe yevakakurumbira muLatin America mumusika weSports unodarika vateveri vanosvika mamirioni 7,8.
Strategic mitambo uye RPG crossovers
Imwe mhando yakawana vateveri vazhinji mu2018 ndiwo marongero emitambo, kusanganisira kasino mitambo.
Muchirevo ichi, kukura kwacho kwaikonzerwa nekuvhurwa kwemasinasi akanakisa epamhepo, iyo yakaratidza yavo mitambo kupa senge roulette, poker kana blackjack, pamwe nemamwe acho anoshandawo semabookmaki emitambo.
Aya mapuratifomu akavhura zvemukati kuti zviwanikwe nyore nyore pamusoro peInternet uye muzviitiko zvakawanda, zvakare kuburikidza neefoni.
Pane rimwe divi, Mazita akadai XCOM 2, Kubudirira V akawanawo hukuru hunotevera mukati meplatifomu inowanikwa yeLinux, Iyo inopa musanganiswa we-turn-based strategy mitambo, nemamwe marudzi akadai se shooter kana RPG.
Mujaho mitambo uye simulators zvakare yakava mamwe evanofarira emitambo muna 2018, uye zvakare akawana nzvimbo muSports, kusanganisa mupiro wayo nema simulators uye kuwedzera nzvimbo yayo yekusvikira yeLinux.
Rimwe remazita anotyisa kwazvo mune ino chikamu anogona kusimbiswa ndeyeRocket Riga, unova mutambo wenhabvu, uko vatambi vari mota dzekutonga kure nemaRocket rockets.
Iko kusanganiswa kwema genresi kwave kuri imwe yesarudzo dzinotyisa dzevakwikwidzi veSports kutenderera pasirese.
Zvisinei, imwe sarudzo mukati memazita emujaho wemapureti, ayo akagamuchirwa kwazvo gore rino, yaive iyo Dhivha Rally, iyo yakamira seimwe yeanonyanya kutambwa mitambo yemitambo mazita paLinux kuburikidza neSteam mu2018.
Kugamuchirwa kwemutambo uyu kwakanaka kwazvo, iyo IGN yeBrazil saiti yakazivisa kuti iyo 2.0 yematombo rally yatove neyakagadzirirwa kuburitswa musi waFebruary 26, 2019, mukutsvaga kugadzirisa ruzivo rwunopihwa neakautangira.
Pasina kupokana Linux iri kuwana yakawanda uye yakawanda nzvimbo mumakwikwi emitambo yemavhidhiyo, sezvo iri kuvandudza zvivakwa zvinowanda zvevatambi kunakidzwa nemhando dzavanofarira dzemitambo yemavhidhiyo, zvisinei nekuparadzirwa kweLinux kwavanofarira.
Ehe saizvozvo kuchine mamwe mazita asina kuwirirana, asi (chaiko) mwedzi miviri kana apfuura, mitambo mishoma yakatsigirwa, gore rapfuura, taive nemitambo mishoma, saka zvinoita kunge inyaya yenguva nekuchinjika.
Chero ani anoramba achisimbirira kutaura kuti Linux haina kunaka pakutamba anogona kungoita zvisizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mhando dzakanyanya kutambwa nemitambo yemavhidhiyo paLinux muna 2018
Iyo mitambo yaunotaura nezvayo yakanakisa.
Kunze kwekuda kuziva, waiwanepi iyo data yemitambo yakatambwa yeLinux?
Crowdfunding yeDiskio Pi, Tab kit yeiyo Raspberry Pi uye ODroid
Peek: software yekugadzira GIF kubva pane yekurekodha skrini